कलियुगका कुरा: June 2011
राजेश हमालका कारण खाते (?)
फोटो साभार : ग्यामेरनेपाल डटकमबाट
भर्खरै एकजना मित्रले सुनाए नेपाली सडकमा आउने ७०-८० प्रतिशत सडक बालबालिकालाई किन सडकमा आएको हो भनेर सोध्यो भने राजेश हमालको फिलिम हेरेर आएको भन्छन् रे। एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अनुसन्धानले त्यस्तो तथ्याङ्क देखाएको ती मित्रले दावी गर्दैछन्।
सडक बालबालिकालाई सोधिएका विभिन्न प्रश्नमध्ये एउटा प्रश्न के कारणले घर, परिवार, गाउँ छाडेर आएको हो भन्ने थियो र त्यसमा धेरैले फिलिममा राजेश हमाल गाउँबाट सडकमा गएर सडक बालबालिका हुँदै धनी भएको देखेर आएको भनेछन्।
थोत्रा सामानको भण्डार
हैन कामै नलाग्ने थोत्रा बस्तु नफालेर ढड्यान बनाएर घरको छतमा होस् कि भर्याङका कुनामा होस्। नभए बरान्डामा थुप्य्राएर राख्ने मै मात्र हुँला कि अरु नि होलान्?
पाँच वर्षदेखि नलगाएको जुत्ता, बाउको पालाको बिग्रेको फोनको सेट, एलसिडी मनिटर ल्याइसकेसि नि पुरानो सिआरटी मनिटर, नयाँ सोफा ल्याएसि नि पुरानो सोफा, प्रयोगमा नआउने साङ्लाको घर भाको किचन र्याकले घर भरियाछ। आफू आँगनाँ सुत्न पर्ला जस्तो भइसक्यो..
समाचार छाप्न पत्रकारकै खप्पर रङ्याइदिन पर्ला र
माने यार यी डडेलधुराका माओवादी सभासद हरिलाल थापालाई। सभासदहरुमा अझै यस्तो हिम्मत बाँकी होला झै‍ मान्याथिन। आफ्नो भाइलाई मास्टरी गर्न दिएनन् भनेर दुई वटा स्कूलका हेडमास्टरलाई कुटी कुटी राजिनामा दिन लगाए रे त। पत्रकार कुट्ने युवा नेतालाई नछाड्नेहरुले यी सभासद्‍ले हेडमास्टरलाई कुटेको त हो नि हामी पत्रकारलाई हैन केरे भनेर बिचमै त नछाड्लान् नि। कि कोही फटाहा सटाहाको, अरुलाई अनाहकमा दुख दिनेको तीन पुस्ते निकाल्न पर्यो पत्रकारकै खप्पर रङ्याइदिन पर्छ...
काम ठग्ने बहाना
हैन! काम ठग्न पनि कति जानेका हौं हाम्ले। SLC मा अलिक थोरै विद्यार्थी मात्र पास भएको भए पो एक दिन बिदा दिनु, धेरै विद्यार्थी पास भए भनेर दुई दिन बिदा दिएछ छोरीको स्कूलले। दुई दिन बिदा भनेसी आज बुधबार र भोलि बिहीबार बिदा हुनु। तर आज बुधबार त जनगणना दिवसको उपलक्ष्यमा सरकारले नै जब्बरजस्ति बिदा थुपारिदएकै छ नि भनेर बिहीबार र शुक्रबार बिदा गराएछन् सरहरुले। अब एकैचोटी अर्को साता रे स्कूल। जय होस्..
प्लास्टिकमा किन रङ्गभेद नीति
आजभोलि धेरै ठाउँमा कालो प्लास्टिक झोलालाई प्रतिवन्ध लगाएका छन् तर उस्तै गुणस्तरको सेतो रङको प्लास्टिकको झोला ती प्रतिवन्धित ठाउँमा चलिरहेको देखिन्छ। यो प्लास्टिकको रङ अनुसार त्यसको असर फरक पर्ने हो कि यो रङ्गभेदको नीति मात्र हो। आफू कालो भएर होला अलिक स‍वेदनशील हुँदै यो कुरा नबुझेर सोध्या, लउन कोही हुनुहुन्छ कि प्लास्टिङ विज्ञ...
गाउँमा पर्यटन महोत्सव
जीन्दगी पर्यटक नजाने हाम्रा छिमेकी गाउँमा १०/१२ जना केटाहरु मिलेर एक महिनादेखि पर्यटन महोत्सव गर्ने भन्दै निकै हल्ला खल्ला गरिरहेका थिए। महोत्सवको उद्‍घाटनको दिन कोही पर्यटक नआएसी एक गाउँले कलाकारलाई रङ्गिबिरङ्गी कपडा लाइदिएर पर्यटक भन्दै स्वागत गरी महोत्सवको उद्‍घाटन गरेछन्।
किन यस्तो गर्‍या होला भन्ने लागिराथ्यो, बल्ल पो बुझें! २०११ पर्यटन वर्ष भाकोले गाउँ गाउँमा पर्यटन महोत्सव गर्नेलाई सरकारले अलि अलि पैसो दिदों रहेछ...
काठमाडौं र अन्य शहरकाले एसएलसीको रिजल्ट थाहा पाएको तीन दिन पछि मैले पनि गाउँमा रिजल्ट थाहा पाएँ। पसललाई सामान किन्न बुटबल बजार पुगेका बाले गोरखापत्र पाउनु भएनछ। बुटवलका कपडा पसले साहुका छोराले पनि त्यसै साल एस एल सी दिएका रहेछन्। साहुजीले छोरालाई नम्बर हेर्न लगाएछन्।
साहुका छोराले मेरो नम्बर देखाएपछि छोरो फस्ट डिभिजनमा पास भएको बाले थाहा पाउनुभएछ। साहुको छोराको नम्बर सेकेन्ड डिभिजनमा थियो रे अनि मेरो चाँहि फस्ट डिभिजनमा। हाम्रा बा मसँग जीवनमा त्यति धेरै खुशी भएको कहिल्यै देख्या छैन त्यस अगाडि र पछाडि।
बिजुली चोर भगुमान
ई! टोलमा नयाँ मन्दिर बनाउने बित्तिकै भगुमानलाई सुरु मै चोर बनाइ दिएछन् छिमेकीहरुले त। तीन महिना जति अगाडि मन्दिर बनाउन भनेर पैसा उठाउँदै आथे। पाँच हजार सम्म रुपैयाँ दिनेको नाम मार्बलमा खोपेर राख्निने भनेकाले पाँच हजारै दिम् कि जस्तो पनि लाग्याथ्यो। तर यसो घाँटी हेरेको मार्बलमा नाम लेखाउन सकिएला जस्तो लागेन र दुई हजार मात्र दिएँ।
१० दिन जति अगाडि मन्दिरको उद्‍घाटन हुँदै थियो एक दिन कार्यालय आउँदै गर्दा देखेको थिए। अनि अफिसबाट साँझ घर पुग्दा राति हुँदा मन्दिर सँधै झलमल भएको देखेर मन्दिरको बिजुलीको पैसा कसले तिर्छ भनेर पुजारी बालाई सोधेको उनले तारमा लाको हुक देखाइदिए। यसो अरु मन्दिरमाँ नि विचार गर्‍या नेपालका सबै जसो भगुमानलाई मान्छेहरुले बिजुली चोर नै बनाइदिया रचन्.....
- खोइ राम्रोसँग बुझिएन
- ए हो र, सुन्नु भाछैन
- अहँ सुन्याछैन।
- पछि फोन गरौं त
- हुन्छ पछि फोन गर्नु न
धेरैजसो मोबाइल फोनको संवाद..
(बुझ्या हो कि नबुझ्या हो कुन्नि फोन)
घर नजिकै कलेज
आफूलाई त न कुनै फेसन सो हेर्न नि पर्छ, न राति राति फेसन टिभी! घर नजिकै दुई तिनवटा कलेज खुलेका छन्। (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा....)
रामदेवको सिको कसैले गरे त हुने
नेपालमा रामदेवको योग गर्छु भन्नेहरु त धेरै नै छन् झैं लाग्थ्यो। तर धेरै मान्छेहरु मै जस्ता गफाडी रचन् कि के हो। झुक्किएर कुनै दिन योग गर्यो भने तीन महिना गफ दिने। नत्र अरु आसन भन्दा रामदेवको यो 'अनशन आशन'को जताततै चर्चा भा बेला भ्रष्टचारीलाई कारबाही होस् भन्दै खोई नेपालाँ अनशन। एक जना चिरञ्जिवी वाग्लेपछि अदालत पनि सुते झैं छ। रामदेव जस्ता कोही अनशनमा बसे केही हुन्थ्यो कि। तर बामदेवहरु धेरै भाको देशमा...
भाले की पोथी सर
फस्ट टाइम वेटरको यस्तो प्रश्न इटहरी आएर सुन्न पाइयो - मटन कि चिकन खाना सर ? (जवाफ - चिकन) लोकल कि ब्रोइलर सर? - (जवाफ- ए! छनौट छ, त्यसो भए लोकल) भाले कि पोथी सर ?
(हास्नुपर्ने कारण धेरै छ हा हा हा...)
अब नेताहरु सगरमाथा चढ्नतिर
उ मैले भन्याथें नि, चुच्चे नाकवाला कर्मचारीहरु सगरमाथा चढेसी अब कुन कुन बाहुन क्षेत्रीले आगुम सगरमाथा चढ्ने हो भनेर। नभन्दै माउवादी माउ प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहालले पार्टीका झण्डासहित तीन जना भएर सगरमाथा चढ्ने घोषणा गरिसकेछन्।